Maxaa looga hadlayaa maanta shirka u socda musharaxiinta iyo xukuumadda? – Bandhiga
Hotelka Decale ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda shir u dhaxeeya Ra’isul Wasaaraha Xil gaarsiinta Xukuumada Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha.
Shirka ka socda Hotelka Decale waxaa sidoo kale ka qeyb galaya Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo Gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaa oo door ku leh shirkan labada dhinac u dhaxeeya.
Sida aan wararka ku heleyno shirka u socda Rooble iyo Musharaxiinta ayaa looga hadlayaa sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskii dhawaan gaareen loogana sii shaqeyn lahaa isku soo dhawaansho labada dhinac dhax marta.
Shirkan Hotelka Decale uga socda Ra’isul Wasaare Rooble iyo Musharaxiinta waxaa ka qeyb galaya Ra’isul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oon qeyb ka aheyn shirkii hore uga dhacay Hotelka Decale.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa doonaya markan in uu qaato door muhiim ah si xal looga gaaro khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya, waxa uuna Rooble ka shaqeenaya qabsoomida shir loo dhan yahay oo xal looga gaaro khilaafka doorashada.